Ny zavatra tsy tiako amin'ny Apple Music sy izay tokony hatsaran'i Apple | Vaovao IPhone
Rehefa afaka 10 andro nampiasa Apple Music isan'andro, dia efa nazava aho fa io ny serivisy mozika mivantana hampiasako manomboka izao, manolo ny Spotify izay handalo. Ny katalaoginao, ny fampidirana amin'ny rafitra sy ny fitaovana ato an-tranoko ary ny vidin'ny kaontin'ny fianakaviana ireo dia mihoatra ny antony ampy hanaovana fanapahan-kevitra saika hatramin'ny andro voalohany, saingy mbola lavitra ny maha serivisy tonga lafatra. Mandritra io fotoana io dia misy zavatra maro izay tsy tiako ary heveriko fa tokony hihatsara i Apple, ary antenaiko ihany koa fa tsy ho ela dia hanao izany izy. Ireto ny soso-kevitro:
1 iTunes, loza feno
2 Rakikira na aiza na aiza
3 Menus tsy misy farany
4 Midira mivantana amin'ny rakipeo na mpanakanto iray, tsy azo atao izany
5 Lisitra nozaraina rehefa rahoviana?
6 Amin'ny maha kinova voalohany azy dia tsy ratsy
iTunes, loza feno
Io no fitoriana voalohany nataoko satria tsy isalasalana fa ity no tena matotra. Apple dia tokony handinika izay ataony amin'ny iTunes ary raha ny drafiny dia ny hanafoana an'ity fampiharana mihamitombo ity, Aleo ho faty vetivety fa tsy ity fijaliana miadana ity iza no mijaly. Apple Music dia tsy latsa-danja ary nanampy tamin'ny iTunes nilatsaka lalindalina kokoa. Izay rehetra mora sy tsotra ao amin'ny rindranasa iOS Music dia tena fitsapana ao amin'ny iTunes, toy ny famoronana lisitra filalaovana.
Rakikira na aiza na aiza
Fa ny kinova iOS dia tsy lafatra koa. Ny zavatra tena manelingelina ahy dia ny fitehirizam-bokin'ny rakikira feno ahy, na dia misy hira tokana ananan'io mpanakanto io ao aminy aza. Manana lisitra maromaro nanampy ny moziko aho, ary ny sasany dia misy mpanakanto izay ananako irery ilay hira, ary ny vokany dia lisitr'ireo fonony goavambe izay manahirana ahy mafy ny fivezivezena Mikaroka izay hitako Marina fa afaka mampiasa ny motera fikarohana aho, izay tsara fa eo amin'ny efijery rehetra momba ny fampiharana, saingy tiako ho misy safidy mba ny rakikira feno izay nasiako no aseho, fa tsy ireo izay fotsiny any satria misy hira ao anaty lisitra.
Menus tsy misy farany
Marina fa manana safidy maro ny Apple Music, ary amin'ny lafiny sasany dia tsy maintsy ampidirina ao anaty fampiharana izy ireo, saingy tsy vitsy koa ny hoe Apple dia tokony nitady vahaolana tsara kokoa ho an'io lisitra safidy lehibe io izay miseho amin'ny menio mitete-midina. Raha saika ny efijery manontolo amin'ny iPhone 6 Plus no raisin'izy ireo dia tsy tiako ny sary an-tsaina hoe manao ahoana ny endrik'izy ireo amin'ny iPhone 4S. Manimba ny estetika tsara amin'ny fampiharana izy ireo.
Midira mivantana amin'ny rakipeo na mpanakanto iray, tsy azo atao izany
Na eo aza ireo menus lava ireo dia misy ny safidy izay tsy takatry ny saina. Raha manaraka ireo kiheba isan-karazany ianao dia afaka mivezivezy ao anatin'ny Apple Music dia mahita hira iray mahaliana anao, manadino ny fidirana mivantana amin'ny artista na rakikira ataon'izy ireo satria tsy azo atao izany, na farafaharatsiny mba tsy hitako ny safidy. Amin'ny alàlan'ny fanindriana io hira io dia hahazo ny playback fotsiny ianao hanombohana, ary amin'ny fampisehoana ny mpilalao amin'ny efijery feno, dia tsy manana safidy hidirana mivantana amin'ilay mpanakanto na rakikira ihany koa ianao. Mahagaga nefa marina.
Lisitra nozaraina rehefa rahoviana?
Eny, azo zaraina ireo lisitra, ary tena mandaitra izy ireo, raha mbola mizara mivantana aminao izy ireo, fa inona avy ireo anarana mpampiasa noforoninay ao amin'ny kaonty Apple Music anay? Nihevitra aho fa afaka mitady mpampiasa mivantana ary afaka mahita ny lisitr'izy ireo. Ny lisitr'i Apple dia tsy ratsy, ary misy zavatra ho an'ny rehetra, fa Te-ho afaka hanaraka namana sy olom-pantatra aho ary hahita ny lisitr'izy ireo ampahibemaso, toy ny amin'ny Spotify.
Amin'ny maha kinova voalohany azy dia tsy ratsy
Navoaka ny Apple Music roa herinandro lasa izay, tokony hanam-paharetana ianao. Fa maika ny hanatsaran'i Apple ny maro ny tsy fahampiana satria manimba fampiharana sy serivisy izay manana toetra tsara lehibe izy ireo. Antenaina fa na dia alohan'ny famoahana ny iOS 9 aza ny app Music dia hamaha ny maro amin'ireo olana ireo.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » Apple products » Apple Music » Ny zavatra tsy tiako amin'ny Apple Music sy izay tokony hohatsarain'i Apple
Ary amin'ireo tsy fahombiazana rehetra hitanao ireo, izay vitsy raha oharina amin'ireo hitako, izay maro hafa, mbola mino ve ianao ny manolo ny Spotify amin'ny Apple Music?
Ka tsy hiverina any amin'ny Apple an'ny taloha intsony isika, raha manao zavatra tsy mety izany ary manohy mandoa izany isika dia efa mandeha tsara izany. Ny tokony hataontsika dia ny manilika azy ireo hahafahan'izy ireo manohy miasa amin'ny zavatra tsara kokoa, fa tsy amin'ny "vaovao" ankehitriny izay navoakany isan-taona ary nanjary tao anaty fampirimana fako tao amin'ny iDevice.
Eny eny, satria ny katalaoginy dia manarona izay rehetra tiako, satria mifangaro tanteraka amin'ny iPad, iPhone, Apple TV ary Mac, satria afaka mihaino azy amin'ny fitaovana rehetra tadiaviko miaraka aho, satria 14,99, € XNUMX ny vadiko ary ny raiko (sy izaho) dia manana kaonty tsy miankina telo ... ary noho ny antony marobe dia izany no antony hanoloako azy amin'ny Spotify.
Tena tokony hihatsara izany. Saingy heveriko fa hiala amin'ny Rdio mankany amin'ny Apple Music aho. Lazaiko aminao fa raha mankany amin'ny rakikira nosoratan'ilay mpanakanto avy amin'ny hira rehetra izay ao anaty lisitry ny playlist dia tsy maintsy ataonao izao manaraka izao: tsindrio ny "teboka telo" hampisehoana ny menio, eo an-tampony no misy ny anaran'ilay hira, mpanakanto ary rakipeo, tsindrio ianao ary hitondra anao any amin'ilay rakipeo mifanaraka amin'izany, avy eo raha tsindrio ny anaran'ny mpanakanto dia hitondra anao any amin'ireo rakikira sy hiran'izy ireo sisa.
Tsy mety amiko izay lazainao fa "lojika" ary nandramako izany, fa tsy nisy. Angamba noho izy io amin'ny iOS 9
Ahoana ny fomba hanampiana ny isa isan-kerinandro amin'ny kalandrie ao amin'ny iOS 8
Hevitra IPhone 8 miaraka amin'ny efijery roa [Video]